Ụbọchị My Pet » 5 Ihe Gwa Chetara Ya O kwesịrị Ị
emelitere ikpeazụ: Apr. 07 2020 | 2 min agụ
Ọ bụ n'ezie dị mfe ikwu ihe na-egosi na a Ihọd ị na-eche ma, karịsịa ogologo okwu mmekọrịta ebe anyị na-Ihọd anyị na-na nke akwadoro, anyị na-agbasaghị ghara. Ukwuu n'ime n'ihi na a ogologo oge mmekọrịta adị anyị ka anyị na anyị n'oge gara aga dị otú ahụ n'ihu ọha n'anya mmegharị na ruo n'ókè nke na eleghị anya bụ eziokwu n'ihi na ị bụ nke ọma na onye gị na. Ma ọ bụla ugbu a na mgbe e nwere obere, Ihe ihe ị pụrụ ikwu-egosi na ị na-elekọta ma na-echetara ya na o kwesịrị na ị dị nnọọ ka o mere ná mmalite ụbọchị na ọbụna karịa otú ahụ ugbu a.
Ederede A Nice Ozi
Ọ bụrụ na ọ bụ na-arụ ọrụ, a dị mfe “Olileanya ụbọchị gị na-aga nke ọma” n'oge nri ehihie-ezumike ga-a dị nnọọ mma n'ụzọ nke na-egosi mmetụta ịhụnanya. Ọ na-egosi na ị na-eche banyere ya na ị na-eche. Ọ bụ n'aka-ya ime ya ọchị.
A Nice ekele On The Way Ọ n'Ọnụ Ụzọ
Sị ihe dị ka “Nwee ọmarịcha ụbọchị” ma ọ bụ “Ledo onwe gị” mgbe ha nọ na ụzọ ha si ga-egosi gị na-elekọta. Ị adịghị mkpa susuo ma ọ bụrụ na nke ahụ abụghị ihe ị na-eme dị ka a goodbye ekele nnọọ mgbe ezie na m n'aka na ọ ga-ekele kwa.
Ihe ndị mmadụ na-n'anya na onye bụ onye na-ege ntị ha n'ihi na-egosi na i nwere mmasị na ha dị ka onye. Ma mgbe a mmadụ anaghị aghọta na onye na ha na-adịghị na-enwe mmasị na ha na-amasị ha otú na-egosi ha na ị na-eme. Dị nnọọ nanị idebe ya n'ime a mkparịta ụka nnọọ n'echebaraghị ya echiche. Ihe dị ka, “Na-egosi na-amasị gị bụ na n'abalị a” na-egosi na ị na-ege ntị.
Ikwu ihe Ezi
Ikpe ihe ị na-ekwu na ihe i chere ga-eme ka ha nwee obi ụtọ. Ya mere ihe atụ ma ọ bụrụ na ọ na-arụ guitar agwa ya na ọ na-akpọ a mmagba ọma, ma ọ bụrụ na ọ bụ n'ime ejiji na-agwa ya, ọ na-ese ọma ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ na-enwe mmasị music agwa ya na ọ bụ nnọọ ihe ọmụma banyere music. Mgbe ụfọdụ, anyị nile na-akụ azụ maka onye iberibe otito.
Gwa Ha ị hụrụ ha n'anya
A otutu di na nwunye na-adịghị ekwu na ọ dị nnọọ mgbe mgbe ha na-ala na a onye. Na a ụzọ ịhụnanya bụ n'ụzọ doro anya na e nwere ma eleghị anya ọ dịghị mkpa ka ike kwuru mgbe niile ma ọ bụla ugbu a na ọzọ ichetara ha na ị na-eme.